၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာမှရှင်သန်သူများတွင် ဆင့်ပွားကင်ဆာများ ဖြစ်ခြင်း။ - Together
ရှားပါးသော်လည်း ကလေးငယ်အသက်ကို ကယ်တင်ခဲ့သော အစောပိုင်းကုထုံးသည် နှောင်းပိုင်းအချိန်တွင် ဆင့်ပွားကင်ဆာကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
မည်သူတွင်မဆို နှောင်းပိုင်းအသက်အရွယ်တွင် ဆင့်ပွားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်သော အချို့ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်တက်စေသော အကြောင်းအချက်များရှိသည်။ များစွာသော လေ့လာမှုများအရ ၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာမှရှင်သန်သူများသည် အသက်ကြီးလာသည့်အခါတွင် ဆင့်ပွားကင်ဆာဖြစ်နိုင်မှုသည် အခြားသူများနှင့် ယှဉ်ပါက အနည်းငယ်မြင့်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာကုသမှုအချို့ သို့မဟုတ် ကင်ဆာဖြစ်ပွားဖူးသော မိသားစုရာဇဝင်သည် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်တက်စေသော အကြောင်းအချက်ဖြစ်သည်။
ဆင့်ပွားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေများစေသော ကုထုံးများ
အချို့ရှင်သန်သူများထဲမှ ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံး ဖြင့် ကုသမှုခံယူထားသူများသည် ရုတ်တရက်ဆိုးရွားစွာဖြစ်သည့် မိုင်းလွိုက် လူကီးမီးယားရောဂါ (AML) ဖြစ်နိုင်သည်။ AML သည် များသောအားဖြင့် ကင်ဆာကုသမှုပြီးနောက် ပထမ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်။ ဆင့်ပွားသွေးကင်ဆာ ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေသည် အောက်ပါတို့ဖြင့်ကုသမှု ခံယူထားသူများတွင် မြင့်မားနိုင်သည်။
အယ်လကိုင်းဂုဏ်သတ္တိရှိသော ပစ္စည်းများ ( ဆိုက်ကလိုဖိုမိုက်ဒ် နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် မာစတာ့ဒ်ကဲ့သို့)
အက်ပီပိုဒိုဖီလိုတောက်ဇင် ( အီတိုပိုဆိုက် သို့မဟုတ် တက်နီပိုဆိုက်ဒ်ကဲ့သို့)
အန်သာရာဆိုက်ကလင်း ( ဒေါ်နာရူဘီဆင် သို့မဟုတ် ဒါဆိုရူဘစ်ဆင်)
ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးအထူးသဖြင့် အသက်ငယ်ငယ်နှင့် ပမာဏများများသုံး၍ ကုသမှုခံယူထားရပါက ဘဝနှောင်းပိုင်းတွင် တစ်ရှူးပျော့ကင်ဆာနှင့် အရိုးကင်ဆာများ ဖြစ်ပေါ်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသည်။ အများဆုံး ဖြစ်တတ်သည့်နေရာများမှာ အရေပြား၊ ရင်သား၊ ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၊ လည်ပင်းအကျိတ်နှင့် အရိုးများ ဖြစ်သည်။
ဤဆင့်ပွားကင်ဆာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် မူလကင်ဆာများဖြစ်ပြီးနောက် ၁၀ နှစ်ခန့်အကြာတွင်မှ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
မိသားစုတွင် ကင်ဆာဖြစ်ဖူးသည့် မှတ်တမ်းရှိခြင်း။
မျိုးရိုးလိုက် ကင်ဆာ-မျိုးဗီဇ အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လွယ်စေခြင်း။ ၎င်းတို့သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရှားပါးသည်။ St. Jude-Washington တက္ကသိုလ် ကလေးကင်ဆာ စီမံချက်၏ တွေ့ရှိချက်အရ ၈.၅%သော ၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာများသည်သာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည် ဟုဆိုသည်။ မိသားစုအတွင်း ကင်ဆာဖြစ်ဖူးသော မှတ်တမ်းရှိပြီး ကလေးငယ်များနှင့် အရွယ်ရောက်စသူများတွင် ထပ်ခါ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေ့ရှိပါက စောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည် မျိုးရိုးလိုက် ကင်ဆာ လက္ခဏာများကို သံသယဖြစ်လိမ့်မည်။ နောက်ထပ် သဲလွန်စမှာ ကင်ဆာသည် အစုံလိုက်ရှိသော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများတွင် စုံလိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ကျောက်ကပ်များ၊ မျက်လုံးများ နှင့် အဆုတ်များ။
အသက်ကြီးလာခြင်း အသက်ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်မှုနှုန်းတိုးလာသည်။
သင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော နှောင်းပိုင်းသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို သင့်ကင်ဆာဆရာဝန်နှင့် ပြောဆိုပါ။ သင့် ပင်မကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို သင့်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ အခြေအနေများကို ပြောပြပါ။ ကုသမှုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်ပါဝင်သည့် သင်၏ ရှင်သန်သူဂရုစိုက်မှုအစီအစဉ်မိတ္တူတစ်စောင် ပေးထားပါ။
အချို့ အခြေအနေများတွင် သင့် ဆရာဝန်မှ ခပ်စောစော သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေ ခပ်စိပ်စိပ် စစ်ဆေးမှု ပြုရန် အကြံပြုနိုင်သည်။
နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူပါ။ အသက်အရွယ်၊ မိသားစုကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းနှင့် ကုသမှုအလိုက် သင့်တော်သော ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုအားလုံး ရရှိအောင်လုပ်ပါ။
သင့်ကျန်းမာရေးကို အာရုံစိုက်၍ သင့်ကျန်းမာ‌ရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို သင်၏အချို့ရောဂါလက္ခဏာများအား အသိပေးပါ။
ကာလရှည် အဆင်မပြတ် ဗိုက်နာနေခြင်း
ဆီးသွားလျှင်နာခြင်း သို့ ဝမ်းသွားလျှင်နာခြင်း
နာတာရှည် ချောင်းဆိုးခြင်း သို့ အသံကွဲခြင်း
ပါးစပ်တွင် အရောင်မရှိသောနေရာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့ အနာများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အနာမကျက်ခြင်း
အချို့ နေထိုင်မှုပုံစံများသည် ကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျော့ချပေးနိုင်သည်-
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကင်ဆာရောဂါများ၏ အကြောင်းအရင်းများအနက် ကာကွယ်မှုအပေးနိုင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဆေးလိပ်ကို စမသောက်ပါနှင့်။ သင်ဆေးလိပ်သောက်နေပါက၊ ယခု ဖြတ်ပါ။ ကွန်ယက် ဆိုက်များနှင့် အသုံးချဆော့ဝဲများစွာက သင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။ အမျိုးသားကင်ဆာအစည်းအရုံး၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနများနှင့် အမေရိကန် အဆုတ်အစည်းအရုံး တို့တွင် သင့်တော်သော အရင်းအမြစ်များ ရနိုင်သည်။
လေ့လာမှုများမှ တွေ့ရှိချက်အရ အရက်များစွာသောက်သုံးခြင်းသည် ပါးစပ်၊ လည်ချောင်းနှင့် အစာရေမျိုပြွန်များတွင် ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးသည်။
သင့် အရေပြားကို နေရောင်ခြည်ထိခြင်းမှ ကာကွယ်ပါ။
နေမှ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များသည် အရေပြားကင်ဆာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင့်အရေပြားကို ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်-
SPF 30 နှင့် အထက် နေလောင်ကာ‌ဆေးများကို ပုံမှန်သုံးစွဲပါ။
နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့လည် ၂ နာရီအတွင်း နေရောင်ကို ရှောင်ပါ
ကျန်းမာသောရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း
ကျန်းမာရေးလျော်ညီသော ဓာတ်စာကိုသာ စားပါ။ အဆီကို ကန့်သတ်ပါ။ အဆီမှ ရရှိသော ကယ်လိုရီသည် နေ့စဉ် စားသုံးသော အစာအာဟာရ၏ ၃၀% နှင့်အောက်သာရှိသင့်သည်။
အမျှင်ဓါတ်များများစားပါ။. အနှံများ၊ အမျှင်များသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် သစ်သီးတို့ကို စားပါ။
ပြုလုပ်ထားသောအစားအစာများဖြစ်သည့် ဆားသိပ်ထားသော အစာများနှင့် ဆားစိမ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဗီတာမင် စီနှင့် အေ ကို များများစားပါ။ တိရစ္ဆာန်များနှင့် လေ့လာမှုများအရ ၎င်းဗီတာမင်များပေါကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သော အစားအစာများသည် ကင်ဆာကိုလျော့ကျစေသည်။
အချို့ကင်ဆာများသည် ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အဖြစ်အများဆုံးနှစ်မျိုးမှာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဗိုင်းရပ်စ် (HPV) နှင့် အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ ဗိုင်းရပ်စ် တို့ဖြစ်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှစ်မျိုးလုံးကို ကာကွယ်နိုင်သော ကာကွယ်ဆေးများရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။.
သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးကို အကြံပြုစေပါ။
လူတိုင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော နေထိုင်မှုပုံစံလိုအပ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ကင်ဆာရောဂါမှ ရှင်သန်သူများအတွက် ပိုမိုအရေးကြီးသည်။